အခမဲ့များအတွက်နေထွက်အိုင်ကွန် Pack ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » icon pack » နေထွက်အိုင်ကွန် Pack ကို
နေထွက်အိုင်ကွန် Pack ကို APK ကို
နေထွက် Icons တစ်ဦးကွဲပြားအိုင်ကွန်စတိုင်အတွက်နေရောင်နဲ့အလင်းအကြားရောနှောဖော်ကျူးဖို့ထူးခြားတဲ့အရောင်ရွေးချယ်မှုသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဖွင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ Google ရဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်း။Disclaimer
တစ်ဦးကထောက်ခံ launcher ဒီ icon pack ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်နေပါသည်! ပုံရိပ်စမ်းကြည့်ရှုရန်အတွက်အသုံးပြု widgets & နောက်ခံများဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြပြီးနေထွက်အိုင်ကွန် Pack ကိုအတူမပါဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားသတင်းများ ICON Pack
goo.gl/JnoU6a - အိုင်ကွန် Pack ကို Eclipse
Moonrise အိုင်ကွန် Pack ကို - goo.gl/nJLV03
• 1040 + ပရီမီယံ Icons နှင့်ထှနျး (XXXHDPI 192 × 192 px) ကျော်
• Bi-Weekly ဂျာနယ် / လစဉ်အပ်ဒိတ်များ (နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်နိုင်သလား)
• 60 ပရီမီယံနောက်ခံများနှင့်ကြီးထွားလာ
• Cloud ကို-based Wallpaper ကောက်ယူသူ
• 24 Launcher များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
• Dynamic ပြက္ခဒိန်ပံ့ပိုးမှု (ဂူးဂဲလ်ပြက္ခဒိန်မကြာခင်မှာပဲလာ)
•စမတ်အိုင်ကွန်တောင်းဆိုခြင်း Tool ကို
•ကိုယ်တိုင် Vector Graphics အတွက်ဒီဇိုင်း
•တင့်တယ်ပစ္စည်း Dashboard ကို
•အကူအညီ / မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများပုဒ်မ
လှုပ်ရှားမှု, ADW, ADW EX, Apex, Atom, Aviation, CM, GO, ဟိုလို, ဟိုလို ICS, KK, L ကို LG ကနေအိမ်, Lucid, Mini ကို, ထို့နောက် Nova, S ကိုစမတ်, Smart Pro ကို, တစ်ကိုယ်တော်, TSF, Unicon, က Xperia Home နဲ့ပိုပြီး။
က Xperia မူလစာမျက်နှာဗားရှင်း 10 သို့မဟုတ်နောက်မှထုံးစံအိုင်ကွန်ကဒ်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အများဆုံးမေတ္တာရပ်ခံဖြစ်ကြောင်း icons ပထမဦးဆုံးအပြုရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲသင့်ရဲ့ icon တွေကိုရဖို့လိုပါလျှင်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ပိုပြီးအချက်အလက်စစ်ဆေးသည် ကျေးဇူးပြု. : https://goo.gl/XMtnga
တစ်ထောကျပံ့ launcher နေထွက် Icons လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ငါအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက် Nova Launcher ကိုအကြံပြုပါသည်။ နောက်ထပ်အကူအညီအတွက် app ကိုအတွင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းထုတ်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
သင်တစ်ဦးမကောင်းတဲ့ rating ပေးခင်မှာ, ငါ၏အကူအညီတောငျးနဲ့ကျွန်မပြုပြင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပူဇော်ဖို့ငါ့အအခက်ခဲဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်ပါ။
Instagram ကို 's Page
Google+ တွင်ဤအကြောက်မက်ဘွယ်အသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့က Android device ကို theming ကြောက်မက်ဘွယ်သောလူနှင့်ချစ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအရာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အမန်ဒါ - goo.gl/wKkcTf
လီယို - goo.gl/NBclvs
ငါ့အလိုရှိသမျှအံ့သြဖွယ် Beta စမ်းသပ်သူများရန်, ဒိုင်ခွက်အဘို့အ Jahir, coccco28 နှင့် Customworx ထောက်ခံမှုနှင့်အကူအညီတောင်း။
• Added 25 နယူး Icons
• Fixed အကွိမျမြားစှာလှုပ်ရှားမှုများ
21.16 ကို MB
အထင်ကရ: အိုင်ကွန် ...
LightLaunch အလင်း ...